Ndifanele ndiwathathe njani amakhadi am eTarot? Funda uKamva Lakho - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ndifanele ndiwathathe njani amakhadi am eTarot? Funda uKamva Lakho
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa ufuna ukuzoba amakhadi kukufumana ikhonkco lamakhadi e-tarot. Fumanisa zonke iingcebiso zethu zokwenza ikhadi lakho le-tarot elifanelekileyo.
Ngaba ungathanda ukufunda nokutolika ikamva lakho usebenzisa amakhadi eTarot njengenkxaso yakho? Obu buchule yindlela entle yokuphonononga okunokwenzeka, yiyo loo nto silapha ukuze sikufundise indlela yokuzoba kunye nokutyhila ukuba indawo yabo yakuba ibekiwe ithetha ntoni kuwe nakwindlela yakho. Thatha ikamva lakho libe sezandleni zakho kwaye ufumane amandla okutsala amakhadi.
Emva kokuba ufumene i-tarot (s) yakho, qiniseka ukuba uwagcine kwindawo ekhuselekileyo kuba baya kukulandela ubomi bakho bonke. Baza kutyhila ikamva lakho kwaye baphendule yonke imibuzo yakho. Nje ukuba ufumene, kuya kufuneka uziqhelanise namakhadi, ujonge kuwo, uwagcine kwaye uwaphathe ukuze amakhadi aqhelane ne-aura yakho yemagnethi kwaye uthathe amandla akho. Okukhona usiphatha kumgangatho, kokukhona uya kuchaza indlela yakho yokuzoba.
Yonwabela Ukufundwa simahla kweTarot kwaye ufumane ikamva lakho.
Ke, ndinokuwakhetha njani amakhadi am?
Unokwenza uvavanyo olulula oluza kubakho ngokungacwangciswanga ukhetha amakhadi angama-22, Ubhekise phantsi, ukuba awukhangeli kude kube sekupheleni kosuku. Uya kuqaphela ukuba ukhetho lwakho lwamakhadi luya kuhambelana nemood yakho ngexesha lasemini. Phinda lo mthambo kangangeentsuku ezingama-22 emva koko uqale ngezi ntsuku zingama-22 zilandelayo kodwa, ngeli xesha, zama ukuthelekelela ikhadi olitsale ntsasa nganye. Uya kumangaliswa ziziphumo zakho kwaye uya kuba ulungele ukuqala ukudweba amakhadi akho okuqala!
Kuyo yonke imizobo yakho, kuyacetyiswa ukuba ulungiselele isithethe sakho kwindawo ezolileyo, ezele luxolo nokuzola kwaye ngaphandle kokukhanya okungqongqo. Unokwenza, umzekelo, ukhanyise amanye amakhandlela aya kusebenza njengezinto ezinokukhuthaza ukhetho lwakho. Konke oku kuyakufuneka ukwenze ukulungiselela umoya womsitho.
Nje ukuba usebenze, ungaqala ukhululeke ngelixa ucinga iingxaki okanye imiba ofuna ukuyilungisa. Rhuqa amakhadi ucinga ngombuzo wakho emva koko wahlule ipakethe ngesandla sakho sasekhohlo. Kwidesika nganye, hlanganisa iihafu ezi-2 unakekele ukubeka isiqingatha esasisezantsi, ngaphezulu.
-Fumanisa i iimfihlo emva kweTarot yaseMarseille -
Ndiza kuwabeka njani amakhadi?
Zininzi iindlela zokukhetha amakhadi akho kodwa eyona ilula yile ukuzikhetha emva kokuba uzibekile kwifayile ye- imilo enqamlezileyo .
Xuba amakhadi ujonge phantsi ngoko rhuqa ii-4 ngokungahleliwe, ukugcina umbuzo wakho engqondweni. Beka ikhadi elinye ngakwesobunxele, ikhadi lesibini ngasekunene, elesithathu phezulu, nangaphandle ezantsi, ngasezantsi kwezimbini zokuqala (ukwenza umnqamlezo).
Ke, qala ukujika amakhadi uwaguqulele. Ukuba amakhadi athile abekwe ejonge ezantsi, ukutolikwa kunokuba gwenxa kodwa ukuba yindlela avele ngayo amakhadi, kuyakubakho isizathu soku. Kwimeko yokuthandabuza, kunokwenzeka ukuba ubandakanye elinye ikhadi ukunceda ukucacisa ukubikezela kwakho.
Athetha ntoni amakhadi?
• Ikhadi lokuqala Inxulumene nawe nombuzo wakho.
• Ikhadi lesibini kuyanceda okanye kuyaphikisana nokubuza imibuzo.
• Ikhadi lesithathu Inxulumene namathuba akho kunye nokubanakho ukufikelela kwinjongo yakho.
• Owesine kwaye ikhadi lokugqibela liyimpendulo yombuzo wakho.
Itarot nganye yamakhadi eMarseille inenombolo (1-22) ehamba kunye noyilo, inani elichaza into. Kuxhomekeke kuwe tolika umyalezo ukuba amakhadi afikile.
Iinkcukacha ezili-15 zokuzonwabisa ofuna ukuzazi malunga neTaurus
I-2021 Horoscope yoPhawu ngalunye lweZodiac: Ixesha lokuphinda ube nethemba kwakhona
lithini ikhadi lam lokubhula
5 kunye no-9 ukuhambelana
Eyona ntsingiselo ingama-666
zithini iimpawu ezibalaseleyo
uyifumana njani indoda yanamhlanje ekuleqa